यो आर्टिकल मैले बिशेष गरि पाल्पा र त्यसको छिमेकी जिल्लाबासीहरूलाई लक्षित गरि लेखेको छु । आर्टिकल कसैको समर्थन र बिरोधमा लेखिएको छैन । पढ्दै जाँदा एक समूदायलाई प्रसय दिएर लेखिएको जस्तो देखिए पनि आर्टिकलको अन्त्यमा त्यस भूभागमा बसोबास गर्ने आम जनसमूदायहरूको हितमा लेखेको छु ।
प्रचण्ड सरकारले पाच नम्बर प्रदेशलाई संविधान संशोधन प्रस्ताबमा थोरै परिमार्जन गरेको छ । लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरू र रोल्पा, प्युठान र रुकुमको पुर्बी भेगलाई प्रदेश नम्बर चारमा राख्ने प्रस्ताव भएको छ । यसो गर्नु परेको प्रमुख कारण के हुन्, त ?
नेपाल २५० बर्षसम्म एकात्मक राज्य व्यवस्थाले चल्यो । मुलुकमा अनेकौं भाषा, धर्म र संस्कृति भए पनि २५० बर्षसम्म मुलुक भरि एउटा भाषा लादियो । एउटै धर्म र संस्कृति लादियो । त्यसले नेपाली भाषी बाहेकका समूदाय र भिन्नै धर्म संस्कृति भएका समूदायहरूलाई दमन र विभेद गरियो । अझ भनौं, त्यस भूभागमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका समूदायहरूले बोलिने भाषा र तिनले अंगिकार गर्दै आएको धर्म संस्कृति ओझेलमा पर्दै गयो । अथवा, तिनीहरूको वास्तविक पहिचान मेटिदै गयो ।
एउटा समूदायको पहिचानलाई राज्यले प्रशय दिने र अर्को समूदायको पहिचानलाई मेटाउनु, के त्यो राम्रो हो र रु एउटा समूदायको मेटिदै गएको पहिचान पुनर्स्थापित गर्न, सो भूभागमा बसोबास गर्दै आइरहेका सबै समूदायहरूलाई समान अधिकारको प्रत्याभूत गराउन र दमन र विभेदको अन्त्य गर्न पहिचान सहितको संघीय व्यवस्था हुनु पर्छ भनेर त्यस भूभागका उत्पीडित समूदायले आवाज उठाए ।
संविधान जारि गर्दा मगरहरूको बाहुल्यता भएको भूभागलाई छिन्नभिन्न बनाइएको थियो । जस्तै, मगरहरूको जनघनत्व रहेको भूभाग पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची, प्युठान, रोल्पा र रुकुमलाई पाच नम्बर प्रदेशमा राखिएको थियो भने उता मगरहरू कै बाहुल्यता भएको स्याङ्जा, नवलपरासी, तनहु, बाग्लुंग, म्याग्दी, गोरखा र पर्बतलाई चार नम्बर प्रदेशमा राखिएको थियो । यसले मगरहरूको प्रमुख थातथलोलाई बिखण्डन गरिएको थियो ।
प्रचण्ड सरकारद्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधनमा हिजो छिन्नभिन्न गरिएका मगरात भूभागलाई अहिले एकै ठाउँमा ल्याएको छ । र, यो नै १९ लाख मगरहरूको साझा माग रहँदै आएको छ भने, त्यस भूभागमा बसोबास गर्ने अन्य समूदायहरूको पनि माग रहेको छ । तर, यो माग माओवादी केन्द्रको नभएर त्यस भूभागमा बसोबास गर्ने आम मगरहरूको मागलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको हो ।
एउटा रोचक र हेर्न लायक तथ्य त के देखियो भने, एमालेले दोश्रो संविधान सभाको चुनाव ताका उसले जनता माझ प्रस्तुत गरेको संघीयताको ढाँचामा बहुपहिचान सहितको संघीय व्यवस्था गर्छौ भनेका थिए । अथवा, मगरात र तमुवानलाई मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउने एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको थियो । जुन वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनसँग ठ्याक्कै मिलेको छ । भने, एमालेले यो संशोधन प्रस्तावलाई आफ्नो पार्टीले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनासँग ठ्याक्कै मिलेकोमा गर्व गर्नुपर्ने होइन र ?
सदियौंदेखि भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा उत्पीडन र विभेदमा पारिँदै आएका मगरहरूको भावना काँग्रेस र एमाले सहित केहि राजनीतिक दलहरूले बुझ्न चाहेनन् । उत्पीडनमा पारिएका समुदायलाई पूर्णरूपले मेटिनै लागेको तिनका पहिचान पुनर्स्थापित गराउंदा देश बिखण्डन हुन्छ भन्नु के तर्कसंगत होला रु सबै समूदायलाई समान अधिकारको व्यवस्था र प्रत्याभूत गर्दा देश कसरि बिखण्डन हुन्छ ?
सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुनासाथ विभिन्न राजनीतिक दलहरू बिशेष गरेर काँग्रेस र एमालेले यसको बिरोध गरेको देखिएको छ । नेकपा एमालेको एक जिम्मेवार नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले त अभद्र, अशिष्ट र असभ्य भाषामा संशोधनको विरुद्धमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिव्यक्ति दिएकी छिन् । भने, केहिले लुम्बिनी टुक्र्याउन पाइदैन भन्दै कुतर्क अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
अहिलेको प्रस्तावित संविधान संशोधनले मगरात क्लस्टरलाई मिलाएको छ । प्रस्तावित प्रदेश नम्बर चारमा बसोबास गर्ने सबै भन्दा ठूलो बाहुल्यता भएको मगर र गुरुङले पछि मगरात र तमुवान अलग अलग प्रदेश कायम गर्ने सहमति गर्दा मगरातको केन्द्रस्थल तानसेन हुन्छ । त्यो अवस्था भयो भने अहिले संविधान संशोधनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने र अभद्र, अशिष्ट र असभ्य भाषामा बिरोध गर्नेहरूले भोलि के गर्लान् त रु पाल्पाका केहि समूहहरूले लुम्बिनी टुक्र्याउन पाइदैन भन्दै आन्दोलन गर्नेहरू भविष्यमा मगरात प्रदेशको राजधानी तानसेन कायम भयो भने तिनीहरूले समर्थन गर्ने कि बिरोध ?
मगरात तमुवान सहितको बहुपहिचान भएको संघीयता हुनेछ भनेर नेकपा एमालेले गएको दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारि गर्यो। त्यसलाई मन पराएर जनताले मतदान गरि जिताएर पठाए, एमालेलाई । अहिले, सरकारले एमालेले नै परिकल्पना गरेको र उतिबेला जनताले रूचाएको संघीय संरचना कायम गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्दा आन्दोलन गर्ने समूहलाई जनताले कसरि बुझ्ने ?
Last Updated on Monday, 26 December 2016 07:14
लखन थापा मगरको पुख्र्यौलीगोरखाको दक्षिणपूर्वीक्षेत्र बुंकोटको काहुलेभंगारभए पनि सुगौली सन्धि पश्चात उनकापुर्खाहरूपहिले झैं इष्ट इण्डियाकम्पनीको फौजमा जागिर खाने र आफ्ना सन्तानलाई उतै पढाउने चलन बसेकोले लखन पनि भारतको अल्मोडापुगेका थिएर उनले त्यहींप्रारम्भिक शिक्षापाए। तत्कालीन समयमा भारत अंग्रेजको उपनिवेशमा रहेकोले भारतीय जनताहरू ‘स्वतन्त्र भारत’ को नाममा आफ्नो स्वाभिमान बचाउन लागिपर्दै थिए । योकुरा तीक्ष्ण बुद्धिका लखनले गहिराईबाटै बुझेका थिए। त्यसैले गोरखा राइफल्समा भर्ती हुने परम्पराछाडी उनी आफ्नै मातृभूमिको सेवा गर्ने दृढ संकल्पका साथ स्वदेश फर्किएर‘पुरानो गोरखगण’ मा भर्ति भएर १६ वर्षसम्म निष्ठापूर्वकसेवागरे । उनी कुशलर साहसी सैनिकहुनुका साथसाथै अत्यन्त दूरदर्शीपनि थिए ।
सन्१८५७मा भारतीय सैनिकले अंग्रेज हुकुमतविरूद्ध गरेको विद्रोहलाईदबाउन नेपालको तर्फबाट स्वयं जङ्गबहादुर २५ पल्टनका साथलखनऊ पुगेका थिए ।पल्टनमा लखन थापालगायतथुप्रै देशभक्त सैनिकहरू पनि खटिएका थिए ।अंग्रेजलाई रिझाएर आफ्नो सत्तालाई सुरक्षितबनाउने दाउबोकेका जङ्गबहादुरले भारतीय विद्रोहीहरू दवाउने क्रममा नेपाली सेनाको गौरवपूर्ण सैन्यशक्तिलाई दुरूपयोग गरे,जसलाई “लखनऊलुट” को संज्ञा दिइएकोछ, जो इतिहासमै बदनाम छ । अंगे्रजको दासताबाट मुक्तहुन भारतीयहरूलेगरेको निश्वार्थ वलिदानलखनहरूले आफ्नै आँखाले देखेका थिए,यसले गोर्खालीहरूको अंग्रेज विरोधी पुरानो मनोविज्ञानलाई जगाई दियो । जङ्गबहादुरले वि.सं.१९१० मा मुलुकी ऐन ल्याई नेपाली समाजलाईतागाधारी, मतवालीवर्गमा विभाजित गरीउचनिच, छुवाछूत जस्ता अमानवीय थितिहरू बसाले । जातजातिअनुसारअपनाइएको न्याय प्रणालीले समाजमा अराजकता बढ्यो ।आमजनताहरू अन्याय, अत्याचार सहन विवश थिए । मुलुकको राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक अवस्था दयनीय बन्दै गयो । यस्ता ज्यादतीहरूले विक्षिप्त नेपाली समाजले निकास खोजिरहेकोसमयमा देशभक्त लखन थापाले विद्रोह गर्ने अठोट गरे । उनले सेनाको जागिर माया मारेर जङ्गबहादुरको अन्त्य गरी अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी शासनसमाप्त पार्नेसंगठित योजना बनाए । वि.सं. १९२७ तिर गोरखाको बुंकोटमा चलाइएको यो अभियानमा उनका सहकर्मी, पूर्व सैनिक र स्थानीय जनताहरूले सक्रियतापूर्वकभाग लिए ।
जातीय भेदभाव, छुवाछूत, मूर्तिपूजामा विश्वास नगर्ने र राजाप्रजालाई समान दृष्टिले हेर्ने नेपालकै पुरानो सन्तपरम्परा मानिने जोसमनी मतमा लखन थापाले प्रथमतःसिद्धि प्राप्त गरे ।जोसमनी धर्मको प्रचार–प्रसार गर्नेक्रममाउनले जङ्गबहादुरको कुकृत्यहरूको भण्डाफोर गर्दै समाजमा जनचेतना फैलाउन आरम्भ गरे । अर्कातिर, करिब २००० व्यक्तिहरूलाईसंगठित गरीउनले विद्रोही फौज खडा गरे र घरेलु हातहतियारहरूभेला गरेर सैन्य तालिम दिए । स्थानीयहरूकोसहयोगमा बुंकोटमा किल्लाको निर्माणगरियोर विद्रोहीहरूलाईआवश्यक रसदपानीस्थानीय गाउँघरहरूबाट संकलन गरिन्थ्यो । जङ्गबहादुरको सत्तालाई ठाडो चुनौती दिंदै उनले सवैजातजातिको प्रतिनिधित्व गराई विद्रोही सरकार बनाए रत्यसको मुख्तियारी स्वयं लखन थापालेनै सम्हाले ।
विद्रोहको तयारीबारे जङ्गबहादुरलेसुईंको पाइहाले र लगत्तै काठमाडौंबाट देवीदत्त पल्टनलाईखटाए । बुंकोटमादुवै सेनाबीच भिडन्त भयो । अन्त्यमा१२ जना विद्रोहीहरूपक्राउ परे, उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याएर कठोर यातना दिइयो ।ती मध्ये लखन थापासमेत ७ जनालाई राजद्रोही ठहर्याइयो। उनीहरू न देशद्रोही थिए न राजा विरोधी ।विद्रोहीकिल्ला परिसरमा उनीहरूलाई क्रुरतापूर्वकरूखमा झुन्ड््याएरमृत्युदण्ड दिइयो। जहानीयाँ शासनविरूद्ध लखन थापाको सुनौलो युग ल्याउने परिकल्पना थियो भनेर स्वयं पद्यजङ्ग राणाले समेत उल्लेख गरेका छन् । सुनौलो युगलाईउदार र भेदभावरहित शासनव्यवस्थाको रूपमाबुझ्नु पर्छ, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र त्यसैको विकसित रूप हो, जसकोप्राप्तीको लागि संघर्षगर्दावि.सं. १९३३ फागुन २ गते लखन थापालेसहादत प्राप्त गरे ।
लखन थापाले जङ्गबहादुरको जल्दोबल्दो समयमा उनकै शासनसत्ताविरूद्ध सर्वप्रथम संगठितरूपले सशस्त्र विद्रोह गर्ने आँट गरे, यही घटनाबाट प्रभावित भएर पछि थुप्रै सपुतहरूले आफ्नो प्राणउत्सर्ग गरे ।यही त्याग र वलिदानबाट नै राणाहरूकोएकतन्त्रीय शासन सदाको लागि ढल्न पुग्यो । त्यसैले वि.सं.१९३३ को विद्रोह नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मुहान हो, जनआन्दोलनको प्रारम्भविन्दू हो । यो घटना उत्कृष्ट र प्रेरणादायी पनि छ । विद्रोहमा स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, सशस्त्र तयारी, भारी जनसमर्थन, स्थानीय सहभागिता जस्ता सवल पक्षहरूविद्यमान छन् भनेवि.सं. १९०३, १९०६, १९०७, १९१४ का विद्रोहहरू देश र जनताकोपक्षमा वा जनअधिकारको बहाली तर्फ लक्षितछैनन् । कतिपय त पद, प्रतिष्ठा वा प्रतिशोधले प्रेरित राजनीतिक षड्यन्त्र मात्र रहेको देखिन्छ । त्यसैले नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा लखन थापाले पु¥याएको योगदान अतुलनीय छ, सर्वश्रेष्ठ र गौरवशाली पनि । यसैको कदर स्वरूप वि.सं. २०५६ मा सरकारले लखन थापालाई शहीदको कोटीमा समावेश गर्यो रसंघीय लोकतान्त्रिकसंविधान घोषणा गरिएकै दिन २०७२ असोज ३ गते सरकारले प्रथम शहीदको घोषणागरेरलखन थापालाईअपूर्व सम्मान दिएको छ । उनको चित्रांकित रू.१०।– को हुलाक टिकट समेत हालै प्रचलनमा ल्याइएको छ । उनको योगदान र वलिदानको उचित कदर गर्ने हो भने उनी राष्ट्रिय विभूतिका वास्तविक हकदार हुन् – यो लखन प्रतिष्ठानको जोडदार माग पनि हो । व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देश र समाजको लागि प्राण उत्सर्ग गर्नेहरू कमै हुन्छन् । त्यस्ता महान व्यक्तिहरू मध्येका एक हुन् – लखन थापा मगर ! वि.सं.१९९७ सालका अमर शहीदहरू शुक्रराज, धर्मभक्त, गंगालाल र दशरथ चन्द पनि सोही कोटीमा पर्दछन् । उहाँहरूको योगदानलाई हामीले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन । किनकि जहाँ शहीदको सम्मान हुँदैन, त्यहाँ कसैको पनि सम्मान हुँदैन ।
(लेखक: प्रथम शहीद लखन थापा मगर स्मृति प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ )।
Last Updated on Friday, 18 November 2016 08:28
Last Updated on Friday, 07 October 2016 15:56
अलिबढी विवेकशील भएछन् क्यारे हाम्रा आदिवासी जनजाति समाज, हिजो आज। नत्र भने आदिवासी जनजाति समूदायका अग्रज नेता अशोक राईले दशैँ टिका लगाएको थाहा पाएपछि सर्बसाधारणबाट उनीमाथि तथानाम गाली बर्षिनु पर्ने। तर, त्यस्तो देखिएन।
नेपालीहरूको चाडपर्बमा चरम विभेद भयो भनेर समानताका लागि उतिबेला श्रद्धेय नेता स्व। गोरेबहादुर खपाङ्गीमगरले दशैँ नमानौं भन्यो। विद्रोह नै गर्यो। तर, धर्मसापेक्ष राज्यको मन्त्री भएपछि राजाको हातबाट दशैँ टिका नलगाई सुख पाएनन्, उनले । दशैँ टिका नलगाएको भए सोहि दिन उनि बर्खास्त हुने पक्का थियो। किनकि उनि हिन्दुसापेक्ष राज्यको एक मन्त्री थिए। हिन्दुसापेक्ष संविधान अनुरूप सपथ खाएर मन्त्री बनेका थिए, खपाङ्गी। त्यो पनि राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा।
जनजाति समाजले त्यो बुझेनन्। उनको पुत्ला दहनसम्म भयो। उनलाई यतिसम्म अपमानित गरियो कि उनि समाजमा शिर ठाडो पारेर हिड्नसम्म सकेनन्। त्यो अपमान उनकै समूदायले गरेका थिए। उनि हिन्दुसापेक्ष राज्यको एक मन्त्री भईसके पछि खपाङ्गीले दशैँ टिका ग्रहण गर्नुपरेको प्रमूख दुई कारणहरू मैले उनको सिंगापुरमा सम्पन्न उपचार पछि लेखेको पुस्तक ुनेपाली राजनीति र समाजमा खपाङ्गीको देनु पुस्तकमा पनि उल्लेख गरेको छु।
नमालुम्, खपाङ्गीले सबैको चाडपर्बलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर दशैँ टिका ग्रहण गरेका पो थिए कि १ तर, उनको ९खपाङ्गी० को यो दाबी छ कि उतिबेलाका ७ कक्षासम्म सरकारी विद्यालयमा पढाइने संस्कृत बिषय हटाउन शिक्षामन्त्रीलाई मन्जुर गराएका थिए। त्यो मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट पास गराउन राजालाई खुशि पार्नु थियो। र, खपाङ्गीले राजालाई खुशि पार्न उनले राजाको हातबाट दशैँ टिका थापेको उनले दाबी गरेका थिए।
दशैँ टिका ग्रहण गर्नुपरेको कारणबारे स्पष्टिकरण दिने मौकासम्म पाएनन्, खपाङ्गीले। त्यतिबेला उनको स्पष्टिकरण त के एउटा कुरासम्म सुन्ने पक्षमा थिएनन्, खपाङ्गीका हिजोका समर्थकहरू। पत्रकारहरू खपाङ्गीको जसरि हुन्छ गल्ति र कमीकमजोरीहरूलाई पर्दाफास गराएर खपाङ्गीलाई नंग्याउने र सदाका लागि समाजबाट बिस्थापित गराउने धाउन्न मै थिए।
त्यो दिनदेखि आफ्नै आदिवासी जनजाति बिशेष गरि मगर समूदायले दशैँ टिका लगाएको भन्ने निहुमा खपाङ्गीलाई एक किसिमले बहिस्कारै गरे, उनका समाजले। उनको अपमान गरियो। र, उनले अस्ति अन्तिम पटक सास फेर्दासम्म उनि अपमानित नै भएर उनको अन्त्य भयो । खैर, उनको शरीर निर्जीव भएपछि भने केहिले उनलाई महान समाजवादी नेताको उपाधिसम्म दिन भ्याए।
त्यस्तै प्रकृतिको राजनीति गर्ने अर्का नेता अशोक राईले पनि दशैँ टिका ग्रहण गरेछन्, यसपालिको दशैँमा । दशैँमा पड्काइने तोप ल्होसार र साकेलामा पनि पड्काइनु पर्छ भनेर अस्ति भर्खर अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो, वहाँले। ल, म दशैँ टिका सम्मान पूर्बक ग्रहण गर्छु। तर, ल्होसार र साकेलामा पनि तोप पड्काउ है सरकार, भनेर त्यो दशैँ टिका ग्रहण उनको सांकेतिक संदेश र माग पो थियो कि त रु
अशोक राईले टिका लगाएको देखेर तुरून्तै केहि जनजाति समूदाय कै मानिसहरूले उनको पनि खेदो खन्न ढिला गरेनन्। उनको खेदो खन्नेहरूमा जनजाति समूदाय र त्यस्तै अनुहारहरू नै भेटिए। भने, उनि आवद्ध दलका महानुभावहरूले राई सबै जातिजातिका पनि नेता भएकैले वहाँले दशैँ टीकालाई सम्मान गर्दै ग्रहण गर्नुभएको हो भन्दै उनको राम्रो बचावट गरियो। तर, त्यस्तो बचावट खपाङ्गी आवद्ध दलका नेता कार्यकर्ताहरूले उतिबेला गरेनन्।
अशोक राई एक राजनीतिज्ञ हुन्। एक राजनीतिक दलको वरिष्ट नेता पनि हुन्। उनि आवद्ध दलको संसदीय नेता पनि हुन्। उस्तै परे देशको प्रधानमन्त्री हुने हैसियत पनि राख्छ, अशोक राईले। के अशोक राई भोलि प्रधानमन्त्री भयो भने उनको जातले मान्ने गरेको साकेला पर्बलाई मात्र राज्यले प्रोत्शाहन गर्ने र अन्य जातजातिले मान्ने चाडपर्बलाई जति निरुत्साहित गर्ने गरियो भने त्यतिबेला उनको र देशको अवस्था के हुन्छ रु
भोलि मधेशी नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा दशैँ बिदालाई एकदिनमा झारेर छठ पर्वको अवसरमा नेपाल भरिनै जबर्जस्ती १५ दिन सरकारी विदा दिने घोषणा गराईयो भने सिङ्गो देशको अवस्था के हुन्छ रु
खैर, एउटा जनजाति श्रद्धेय नेता स्व। गोरेबहादुर खपाङ्गीमगरले दशैँ टिका ग्रहण गर्दा आफ्नै समूदायबाट आजीवन तिरस्कृत भएर बाँच्नु पर्यो। भने, अर्का जनजाति नेताले त्यसरी नै दशैँ टिका ग्रहण गर्दा केहिले नकारात्मक टिप्पणी गरेपनि केहिले उनको बचाऊ गर्यो। भने, धेरै मौन रहयो। यहाँ के विश्लेषण गर्न सकिने भयो भने कि त जनजाति समाज थोरै विवेकशील भएका रहेछन् कि त जनजाति समूदाय भित्रै पनि साम्प्रदायिक विभेद रहेछ। या, नश्लावादी सोच र संकीर्ण मानसिकताले ग्रस्त छन्, आदिवासी जनजाति भित्र पनि।
मूलुक संविधानतस् धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित भईसके पनि धर्मनिरपेक्षताको कार्यन्वयन हुन अझै बाँकि नै छ। राष्ट्रपतिले सर्बसाधारणलाई दशैँ टिका लगाइदिने कार्यको निरन्तरता, दशैँ र शिवरात्रिको दिन नेपाली सेनाद्वारा टुडिखेलमा तोप सहित हर्ष बधाई कार्यको निरन्तरता र दशैँमा १५ दिनसम्म सरकारी बिदाको व्यवस्था आदिको निरन्तरताले अझै पनि नेपालमा धर्मनिरपेक्षता कार्यन्वयन नभएको प्रष्ट देखिन्छ।
धर्मनिरपेक्षतालाई अपव्याख्या गर्दै खसआर्य समूदायबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुँदा दशैँमा १५ दिन सरकारी बिदा गर्ने गरिएको छ। भोलि कथम्कदाचित आदिवासी जनजाति समूदायबाट राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्न पुग्यो भने तिनले दशैँ बिदालाई एकदिनमा झारेर ल्होसार अथवा साकेला पर्बमा १५ दिनसम्म सरकारी विदा दिने र सरकारी कर्मचारीहरूलाई ल्होसार अथवा साकेला पर्बको अवसर पारेर सरकारी ढुकुटीबाट बोनस बाँडियो भने अन्य समूदायहरू चुप लागेर बस्न सक्लान् र रु
दशैँमा बढीमा दुई दिनसम्म सरकारी बिदा गर्दा राम्रो हुन्छ। पूर्वका राईलिम्बुले मनाउने साकेला पर्ब एक नम्बर प्रदेशमा मात्र एक दिन सरकारी बिदा हुनुपर्ने। छठ पर्ब मदेशको दुई र पाच नम्बर प्रदेशको तराई भेगमा मात्रै सरकारी बिदा हुनुपर्ने। ल्होसार ९तामांग र शेर्पाको० त्यस क्षेत्रमा मात्र एक दिन सरकारी बिदा हुनपर्ने।
नेवारको आफ्नै सांस्कृतिक पर्ब छ। त्यस दिन नेवारहरूलाई मात्र एकदिन सरकारी बिदाको व्यवस्था गर्दा उचित हुन्छ। गुरुङको ल्होसारमा चार नम्बर प्रदेशमा मात्र एकदिन सरकारी बिदा हुनुपर्ने। माघे सकराती र १५ फागुनमा मगरात क्षेत्रमा मात्रै दुई दिन सरकारी बिदा हुनुपर्ने र माघी पर्बमा थरुहट क्षेत्रमा मात्र एकदिन सरकारी बिदा हुनुपर्ने व्यवस्था भए अति उत्तम हुनेछ।
साथै अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समूदायहरूलाई पनि तिनीहरूको सांस्कृतिक पर्बमा उनीहरूलाई मात्र एक(एक दिन सरकारी बिदाको व्यवस्था गर्दा अति सान्दर्भिक हुनेछ। बर्षमा दुई पटक हुने इदमा इस्मालहरूलाई मात्र सरकारी बिदाको व्यवस्था गर्दा उत्तम हुन्छ।
नेपालीहरूले धेरै दिन चाडपर्ब मनाएर समय बर्बाद गरेकाले पनि नेपाल बिपन्न भएको हो, भन्न सकिने आधार छन्। इसाई धर्म मान्ने देशमा बर्षमा मात्र दुई दिन सरकारी बिदा हुन्छ। क्रिस्मस र नयाँ बर्षमा। बाँकि सबै दिन उनीहरू काममा खटेका हुन्छन्। त्यसैले नै विश्वका सम्पन्न र शक्तिशाली देशहरू इसाईहरू बसोबास गर्ने देश नै छन्। जस्तै अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, जर्मनी, अस्ट्रेलिया आदि।
विकसित देशका मानिसहरूले विभिन्न नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको विकास र आविस्कार गरिरहँदा हामी नेपालीहरू चाडपर्ब मनाएरै समय र धनसम्पति बर्बाद गरेका छौं भन्ने तर्कमा दुई मत नहुनु पर्ने हो।
रियाद (साउदी अरब)
Last Updated on Thursday, 13 October 2016 17:18
Last Updated on Saturday, 17 September 2016 16:04